Siningi isikhathi kumdlalo - uAmla
Oshayela amaStandard Bank Proteas, uHashim Amla, uthi siningi isikhathi emdlalweni ukuze kutholakale umphumela, nokho usuku lokuqala luhlushwe imvula kumdlalo wesithathu weTest kudlalwa ne-New Zealand eSeddon Park eHamilton ngoMgqibelo. uAmla uthole ama-runs amaningi ngokuthola ama-runs angu-50 awesi-32, ngaphambi kokuthi imvula iqede umdlalo ongumqhudelwano phakathi kwebhola ne-bat, umphumela uku-123/4 emuva kwesidlo sasemini.
Beku u-50 ka-Amla wokuqala kwi-tour kuwona wonke ama-format, i-innings ebinesimilo obunama-boundaries angu-9. Uncome abaphosela i-New Zealand, abasebenzise isimo ukuze sihambelane namakhono abo kwisimo esinzima sokushaya.
"Kushintshe kwaba usuku lokuqala olulungile," uAmla ekhuluma ngokukhungatheka kosuku. "I-wicket ibinomfuthwana, futhi emuva kwesidlo sasemini, ibhola liqale ukuthola i-swing eningi. Siyabonga ukuthi sikwazile ukuthola ama-runs, kodwa sisakude nokuthola umphumela omuhle kule-wicket."
"Bekumnandi ukuthola ama-runs, ngizizwe kamnandi," kusho uAmla. "Bekunzima ukuthola ama-runs lapha, bekuguqubele, besithemba ukuthi lizophenya futhi ntambama amafu abuye. Bekunzima, kuzomele abadlali balwe ukuze bathole ama-runs kusasa."
uAmla uthi isimo somqondo kanye nezinhlelo zizofana ngaphandle kokuthi isimo sezulu sinjani, kuzomele kuhlangane umphumela omkhulu we-innings yokuqala ngethemba lokuthi ama-seamers azoba nenhlanhla kwisimo esivumayo.
"Siningi isikhathi esisakhona kumdlalo," esho echaza. "Mhlawumbe silahlekelwe ama-overs angu-50 kodwa uyawathola kulezinsuku ezine ngohafu wehora njalo ekuseni. Izinhlelo azishintshi; ufuna ukuthola ama-runs amaningi kwi-innings yokuqala futhi ahlele kusukela lapho. Yinde indlela uma sikhuluma ngokushaya, sifuna ukuzama futhi sithole umphumela omuhle ukuhlela umdlalo."
uFaf du Plessis (33) noTemba Bavuma (13) bazoqhubeka ne-innings beku-123/4 ngeSonto. Umdlalo uzoqala ngo10h30 eNew Zealand (23h30 SAST), ama-overs asele azohlangana ngokuhamba kosuku.
uAmla ugqamisa usuku oluguqubele ngokuthola u-50 AmaProteas aqonde ukuqeda ihlobo elinempumelelo engaphezulu uPhilander ujabulela ukubuya kwinkundla emnika inhlanhla AmaProteas ahlula amaBlack Caps kusele izinsuku ezimbili Ithemba nenhlanhla kusiza uDuminy Ama-wicket asekugcineni ashiya womabili amazwe egculisekile AmaProteas alungiselela ukubeka yonke into encupheni kwiTest yesibili Imvula ithatha usuku lokugcina eDunedin uElgar noDu Plessis bagcina amaProteas ehamba phambili iMaiden five-wicket haul kaMaharaj igcina amaProteas kumqhudelwano Abaphosela amaProteas kumele babekelekele kwisimo esikhohlisayo